Market Analysis Report 21.02.2018 - Blockchain News
Febroary 21, 2018 Admin
The MVIS CryptoCompare Digital Assets 10 Index efa mihidy amin'ny 9,250.01 amin'ny vola aman-karena 0.88% ny andro.
Tamin'ny fotoana nanoratana, ny Bitcoin vidiny dia nipetraka teo $11,098 representing a loss of 2.4% any am-parany 24 ora. Mihoatra ny $ 1.8B danja ny BTC dia nanakalo ao amin'ny BTC / USD tsena misolo tena ny 27.6% anjara ny eran-boky isan'andro. Ny BTC / JPY mpivady maneho ny 42.5% anjara.
Ny vidiny dia nihena Ethereum 5.4% tao anatin'ny 24 ora, ary amin'izao fotoana izao nipetraka teo $887, maherin'ny $ 400M danja ny Etera nifanakalo tamin'ny lasa 24 ora ao amin'ny Ita / USD mpivady izay manana 29.5% tsena anjara isan'andro boky barotra.
Hoy i Venezuela Petro ny Pre-Sale nanangana $735 Million
Venezoela dia nanambara mialoha fa ny fivarotana ny diloilony tohanan'ny cryptocurrency, ny Petro, nahasarika $735 tapitrisa tamin'ny andro voalohany. Ny governemanta ihany koa dia namoaka ny boky mpividy, ary nanamafy fa afaka mampiasa mafy mpividy vola sy ny cryptocurrencies, but not bolivars. The Superintendent of Cryptocurrencies, Carlos Vargas, stated:
“Ny presale ary ny voalohany ho Coin Manolora atao amin'ny vola mafy sy ny cryptocurrencies, fa tsy Bolivars. Ny andraikiny dia ny hametraka ny Petro tsara indrindra ao amin'ny tanana, ary avy eo ny faharoa tsena hiseho.”
Korea Atsimo Manohana 'Normal’ Crypto Trading
South Korea appears to be softening its stance on cryptocurrency trading. According to Yonhap News, Choe Heung-sik, mpanapaka ny Financial maso Service, hoy ny governemanta “dia hanohana cryptocurrency varotra ara-dalàna raha toa varotra natao.” According to BusinessKorea, ny governemanta ofisialy tafiditra amin'ny asa vola virtoaly hoy force:
“Mandinika tsara isika amin'ny fananganan'anaka amin'ny ny fifanakalozana fankatoavan'ny rafitra toy ny fitsipika eo amin'ny cryptocurrencies fanampiny. Tena mety isika benchmark ny modely ny Faritanin 'i New York izay manome alalana ny mifantina [for fifanakalozana asa].”
RMIT University nandefa Aostralia Voalohany Blockchain Course
RMIT, Aostralia fikarohana oniversite-bahoaka, no nandefa voalohany Aostralia Blockchain oniversite mazava ho azy, according to Business Insider Australia. The 8-week course, mitondra ny lohateny hoe "Fampandrosoana Blockchain Strategy", Noforonin'Andriamanitra ny RMIT ny Blockchain Innovation Hub sy ny mpiara-miasa amin'ny mpanoro hevitra Accenture sy fintech Hub Stone & tsaoka. Jason Potts, ny mpitantana ny Blockchain Innovation Hub, nilaza Business Insider Australia:
"Tsy ireo zavatra iray izay iray manontolo teknolojia isan-karazany be dia be no tonga niara-handray anjara amin'izany miasa. Ny ankamaroan'ny Mazava ho azy fa izany dia natao mba hanampiana ny mpitantana sy ny mpitarika mpandraharaha mba hahatakatra fa tsy hoe ny fomba teknolojia vaovao io asa, sy mahafantatra zavatra izay ny tena ao ambadika, fa koa ny fomba ahitana taratra raharaham-barotra sy raharaham-barotra tetikady lasitra. "
By Crypto Ampitahao Market Analysis Report 21.02.2018
10% Off Fees On Bitmex: ny https:...
CheapAir Filoha Tale Jeneralin'ny Jeff Klee: Accept...
Moa Bitcoin (BTC) Still Good LO...
Previous Post:Ny Blockchain-consortium R3 mamorona foibem-pampianarana ho an'ny mpisolovava.
Next Post:Ny mpandraharaha dia nanambara voalohany hardcore ny blockchain Dogecoin
comprar criptomonedas hoy i:
Febroary 27, 2018 amin'ny 8:18 PM
Ariana hoy i:
March 2, 2018 amin'ny 10:50 AM
Beatris Neiswander hoy i:
March 7, 2018 amin'ny 4:43 PM
Chau Wassman hoy i:
March 9, 2018 amin'ny 5:05 AM
informant hoy i:
March 10, 2018 amin'ny 7:07 AM
Maude Mcmurtry hoy i:
Mey 23, 2018 amin'ny 11:21 AM
Caryn Trego hoy i:
Mey 29, 2018 amin'ny 6:38 AM